देश हार्दा जित्ने नायकहरू •
डा. साधना प्रतिक्षा
अभिभावकका लागि यो प्रश्नको उत्तर दिनु त्यति सजिलो कहाँ थियो र ? त्यसमा पनि केटाकेटीलाई बुझाउनु झनै कठिन ! त्यसपछि त उनीहरू केटाकेटीलाई कहिले एउटा छोराका लागि आआपूmलाई असली आमा भन्दै झगडा गर्ने दुई महिलाको कथा त कहिले एक डल्लो कुराउनी बाँड्ने निहुँमा आपसमा लड्ने बिराला र सो कुराउनी जोखेर बराबर बाँडिदिने निहुमा सबै आफैंले खाने बाँदरको कथा सुनाउन थाले। थाहा छैन कति केटाकेटीको चित्त बुझ्यो, कतिका मनमा अभैm जिज्ञासा बाँकी नै छ ! तर यो देशको रंगमञ्चमा सत्ता र शक्तिको दाउपेचको नाटक भने चलि नै रहेको छ। नाटकका नायकहरू कोही बीच सडकमा जमेका छन्, कोही कोठे बैठकमा रमेका छन्, कोही उत्तरको मुख ताकिरहेका छन् भने कोही दक्षिणको बाटो ढुकिरहेका छन्। मौका यही हो भन्दै कोही जनताका घरदैलो धाउने नाटक पनि गरिरहेका छन्। जो जसरी प्रस्तुत भए पनि यी सबै देश हार्दा जित्ने नायकहरू हुन्। नाटकको उत्कर्षमयी दृश्य भने यस्तो रह्यो—
सडकमा पलेटी कसेर यी नायकले ‘हामी यहाँ छौं’ भनिरहेकै बेला एउटा किशोर आफ्नो परिचयसहित उनीहरूसामु उभिन्छ र बोल्छ, ‘म जनयुद्धका बेला आमाको गर्भमा थिएँ, अहिले तिमीहरूसामु उभिएर सोध्दैछु– तिमीहरू त यहाँ रहेछौ तर आधा रातमा कुनै अज्ञात समूहले घरबाट थुतेर लगेका मेरा बाबा खै कहाँ छन् ?’ उसको प्रश्नको जबाफ त्यहाँ कसैसँग थिएन। ऊ आँखाभरि आक्रोश बोकेर फर्कन्छ। लगत्तै एउटी मैलीधैली युवती जिङ्ग्रिङ परेको कपाल फिँजाएर आइपुग्छे अनि उसैगरी प्रश्न गर्छे, ‘तिमीहरू त यहाँ रहेछौ तर मेरा पति खै ? यतिका वर्षदेखि म उनको खोजीमा भौंतारिइरहेकी छु। कहाँ हराए उनी र मेरा बैंसालु सपना ?’ यसरी अलाप–विलाप गर्दै बलीन्द्र धारा आँसु झारेर ऊ मञ्चबाट बाहिरिन्छे। प्रहरी जवानसँग बिहे भएको महिना दिनमा नै विधवा भएकी ऊ मानसिक सन्तुलन गुमाएर यसरी नै आफ्नो पति र बैंसालु सपनाको खोजीमा भौंतारिँदै हिँडिरहेकी देखिन्छे।
छिमेकी मुलुकका जनता कोभिडविरुद्ध खोप पाउँदैछन्। हाम्रोजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकले चुनावी खर्च खोपको व्यवस्थामा लगाउन सकेको भए ! यति मात्र होइन हाम्रा केही राजनीतिक नायकहरू अझैं जनताको बलिदानको आह्वान गर्न पछि परेका छैनन्। यतिबेला हामीकहाँ थरीथरीका नायकहरू फेरि नयाँ–नयाँ सपना र आश्वासनका साथ अभिनयमा तल्लीन देखिएका छन् तर यिनीहरू सबै देश हार्दा जित्ने नायकहरू नै हुन्। त्यसैले पटाक्षेप हुनुपर्छ यो नौटंकीको !